Ny protas an'ny Star Wars dia namerina an'i Winnie the Pooh | Famoronana an-tserasera
Ny tarehin-tsoratra Star Wars dia naka sary an-tsaina an'i Winnie the Pooh sy ny namany
Star Wars: Mifoha ny hery midika hoe fiverenana amin'ireo fizarana telo voalohany izay ireo nanisy tombo-kase ny hevitry ny hery, ny lafiny maivana ary ilay Obi One Kenobi izay toa nilatsaka avy tany an-danitra, nefa tsy nanadino an'i Luke Skywalker, Han Solo, Leia ary mpilalao sarimihetsika hafa avy amin'ity saga foronina noforonina malaza ity.
Izy izao dia mpanao sary monina any Florida fantatra amin'ny anarana hoe James Hance izay manana natambatra ireo olo-malaza Star Wars miaraka amin'i Winnie the Pooh. Andian-tsary izay mitondra ny lohateny hoe "Wookie the Chew", izay amboarany an-tsary an'i Chewbacca ho Pohh the Bear sy Eeyore ho miaramila amperora ary endri-tsoratra maro hafa izay ho fantatrao haingana, satria ity fifangaroana ity dia liana sy manam-pahaizana manokana hahatongavana ho zavatra mahafinaritra.
Ary tsy hijanona amin'ny inona ny fanoharana, manana kalitao tsara eny an-dàlana, Hance koa dia namoaka boky audio ny tantara. Fomba iray tsara hanomezana sehatra bebe kokoa an'ity andiana sary antsoina hoe "Wookie the Chew" ity izay azo antoka fa hahagaga mihoatra ny iray, satria ao amin'ny sary tsirairay avy dia ahitantsika hatsaram-panahy sy fomba manokana hahitana lafiny iray hafa amin'ireo olo-malaza toa an'i Princess Leia na R2D2.
Fotoana mahafinaritra hitanao teboka fomba fijery iray hafa ho an'ireo endri-tsoratra izay mbola any amin'ny sinema maro izay ahafahan'ny olona mihaona indray amin'i Han Solo antitra, Chewbaca, R2D2 ary C3PO.
Anananao ny azy Etsy, ny tranonkalanao jamesjance.com y Twitter for manakaiky ny sisa amin'ny asany ary afaka manana fotoana mihainoana an'io boky audio io, na dia tokony ho amin'ny fiteny Anglo-Saxon aza izy hahitana ny tantaran'i "Wookie the Chew." Andian-tsarimihetsika mahafinaritra izay tsy azonay natao tsy hita maso ireo andalana ireo ao amin'ny Creativos Online.
Raha te hanao vazivazy kely ianao, aza adino ny fanendrena avy eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny tarehin-tsoratra Star Wars dia naka sary an-tsaina an'i Winnie the Pooh sy ny namany
Constanza dia hoy izy:
Tiako! Amin'ny maha mpankafy kintan'ny ady ahy dia fantatro fa mandany fotoana be dia be ny mpamorona manavao fanajana ny endri-tsoratra sy ny toetrany vaovao :) :) Miarahaba !!
Valiny ho an'i Constance
Sary nataon'i Watercolor Lugman Reza
Adobe Capture: Saripika izao tontolo izao ary adikao amin'ny kaody loko